Nagu saabsan | Shirkadda Mit-ivy Industry Co., Ltd.
Nala soo wac: WhatsApp / wechat: + 86-13805212761 / + 86-18705999280 / + 86 199 6195 7599
Kiimikooyinka aasaasiga ah
MIT-IVY Warshadaha CO., LTD
MIT –IVY Kiimikooyinka Warshadaha Co., Ltd. waa soo saare hormuud iyo ganacsade kiimiko ah muddo 16 sano ah taasoo sameysay 4 warshadood oo u gaar ah oo leh qalab wax soo saar oo dhameystiran iyo maareyn taxaddar leh iyo dayactirka mashiinada.
Waxaan u adeegsanaa tikniyoolajiyad wax soo saar horumarsan iyo habab tijaabo ah si aan u xaqiijino wax soo saarka, tayada xakamaynta si aan ula kulanno heerka. Waxaa naloo ansixiyay SGS, ISO9001, ISO140 01, GB / HS16949 iyo T28001.
Waxyaabaha muhiimka ah ee Mit-Ivy waxaa ka mid ah kuwa soo socda：
Dheeh dhexdhexaad, dawooyin dhexdhexaad.kiimikooyin khaas ah
2-Naphthol Bon acid 2,5-Dichlorotoluene 2,3-Dichlorobenzaldehyde 2 ', 4'-Dichloroacetophenone 2,4-Dichlorobenzyl aalkolo 3,4'-Dichlorodiphenyl ether "1,3-Dichlorobenzene
PDEA "N-Ethyl-m-toluidine 3-Methyl-N, N-diethyl aniline 3- (N-ethylanilino) propiononitrile N-Ethyl-N-hydroxyethylaniline N-ethyl-N-phenylbenzenemethanamine N-2-cyanoethyl-N-ethyl -m-toluidine N-Benzyl-N-ethyl-m-toluidine N, N-Diethyl aniline N-Ethyl-o-toluidine N-Ethylaniline "N, N-Dimethylaniline
CI Aasaaska Jaalaha 2 "Crystal violet lactone CVL methyl violet" Aasaasiga Cagaaran 4
Dyestuffs, kuwa dhexdhexaadka dawooyinka, kuwa dhexdhexaadka ah ee sunta cayayaanka, adheshes, wakiilada xiraya iyo warshadaha kale. waxaa soo saaray teknolojiyaddii ugu dambeysay oo leh tayo deggan oo nadiif ah in ka badan 99.7%.Suuqyadeenna ugu waaweyn waxaa ka mid ah Ameerika, Hindiya, Afrika, Indooniisiya, Turkiga, Koonfur-bari Aasiya, Aasiyada Galbeed iyo wixii la mid ah. Waxaan nahay alaab-qeybiyaha ugu muhiimsan ee alaabada kiimikada kaliya maaha maxalliga laakiin sidoo kale suuq caalami ah. MIT-IVY Industry Waxyaabaha ugu muhiimsan waxay wadaagaan 97% suuqa gudaha ee ku takhasusay wax soo saarka iyo maaraynta, Waxaan ku siin karnaa badeecadaha qiimo tartan badan. tayo sare leh iyo qiimo iyo soo dhaweyn in lala tashado.
Warshadaha anhydrous Sodium sulfate waa mid ka mid ah alaabada ceyriin ee kiimikada aasaasiga ah, oo si weyn loogu isticmaalo kiimikada, waraaqda iyo muraayadaha, dheeha, daabacaadda iyo dheehida, warshadaha dharka iyo dawooyinka. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa soo saarida fiber-ka synthetic, maqaar, biraha aan diiranayn, dhaldhalaalka dhaldhalaalka iyo wixii la mid ah. Waxsoosaarka soodhadhka ah ee sodium sulfate ka ah daahirnimo sare iyo dheecaan wanaagsan, oo daboolaya kala duwanaanta wax soo saarka ee 20 mesh - 2000 mesh, oo inta badan loo isticmaalo reagent, reagent Battery, galoofyada latex, intermediates cayayaanka, Bacriminta, daawooyinka dhexdhexaadka ah iyo cuntada lagu daro iyo meelaha kale, oo leh horumarinta dhaqaalaha qaranka iyo kor u qaadida heerka nolosha dadka waa kuwo isku dhow.
1. Macaamiil ayaa ugu horreeya. Waxaan isku dayeynaa inaan macaashkeena u soo bandhigno macaashka ugu badan ee ku saleysan waxtarka labada dhinac.
2. Kalsoonidu waa tan ugu muhiimsan.
3. Xakamaynta tayada waa aasaaskayaga.
4. Dareen weyn oo masuuliyadeed.
Waxaan mas'uul ka noqoneynaa kaliya alaabtayada, macaamiisheena, alaab keenayaashayaga iyo sidoo kale bulshada.
Waxaan u hoggaansameynaa inaan ka faa'iideysano bulshada, waxaanan si joogto ah u abuureynaa macaamiisha, annaga oo hayna daacadnimo leh wax wada qabsi iyo barwaaqo sooran. Marka waxaan ku siin karnaa dhexdhexaadiyayaal muhiim u ah mashruucaaga oo soo gaabin karnaa xalka isku dhafka si aan kuugu siino alaab nadiif ah oo sare. Mas'uul ka noqo macaamiisheena, shaqaalaheena, bey'adeena iyo bulshada waxqabad deg deg ah iyo guul dhaqaale oo si aan kala sooc lahayn u wada lahaadaan. Waxaan diiradda saareynaa goor hore si aan u barno shuruudaha bey'ada iyo bulshada ee ganacsigeena uguna raad raacno waddooyin cusub oo waara. Tiknoolajiyada marka hore, tayada aasaasiga ah, macaamilku sida Eebbe yahay, daacadnimada aasaaska "
Himiladayada ugu dambeysa:
Iyada oo ku saleysan dadaallada joogtada ah ee lagu horumarinayo beeraha kiimikada cusub, waxaan bixinnaa alaabo bey'adeed u fiican oo farsamooyin sare si loo daboolo baahida macaamiisheena.
Warshadaha MIT-IVY waxaa ka go'an inay kuugu adeegaan si hufnaan leh.
Xirmooyinka ayaa sidoo kale noqon kara sida loo baahan yahay macaamiisha
3. Su'aalo kasta oo lagu jawaabo 24 saacadood gudahood
4. Qiimaha Warshada.
5. Gaarsiinta degdegga ah. Waxaan wada shaqeyn fiican la leenahay dad badan oo xirfadlayaal soo gudbiyayaal ah; Waxaan kuu soo diri karnaa badeecadaha markii aad xaqiijiso amarka.
Waxaan ka shaqeyn karnaa shixnadaha kala jaban, la kulanka warshadda MOQ Waxaan diyaarin doonaa shixnadaha soo socda ee ka socda warshaddeenna illaa bakhaarkaaga.
Waxaan ka xoojin karnaa amarradaada yar yar warshado kala duwan, iyadoo dhamaanteena la gaarsiinayo iyadoo la adeegsanayo wadada ugu kharash-badan ee la heli karo. Waqtiga meelaynta dalabka, waxaan ku siin doonaa faahfaahin ku saabsan mugga shay kasta iyo weelka cabbirka la isticmaali doono.
Waxaan bixinaa xirmo badda u qalanta oo dhameystiran, annaga oo diyaarinayna wax walba ilaa ay alaabtu ka imanayso bakhaarkaaga ama xarunta qaybinta.
Gaarsiin ayaa la bixin karaa.
- Ka faa'iideysiga rarka xamuulka ee kuu gaarka ah
- FOB dekedda Shiinaha
- CIF ilaa dekedda kuugu dhow
Haddii aad leedahay gudbiyahaaga gaarka ah ama aad jeceshahay inaad abaabusho shixnad; haddii aad doorbideyso FOB ama CIF, waxaan ku faraxsanahay inaan sheegno oo aan bixinno hadba habka aad doorato. Fadlan xorriyad inaad ugala hadasho dhammaan xulashooyinka nala.
Weydiimaha ku saabsan badeecadeena ama pricelist, fadlan ka tag emailkaaga ceo@mit-ivy.com ama WhatsApp 008613805212761, waxaanan kula soo xiriiri doonnaa 24 saacadood gudahood.weydiin
Aagga Warshadaha ： Xuzhou City, Gobolka Jiangsu, Shiinaha
Whatsapp: +8613805212761 (Maamulaha Guud: Athena)